Sideebaa loo daweeyaa cudurka qaaxada? - somali
Sideebaa loo daweeyaa cudurka qaaxada?
Cudurka qaaxada markasta kolka u horaysa waxa lagu daaweeya afar daawo uu iskujira oo kiniin ah, afar dawona ka kooban. Daawooyinka aasaasig ah ee qaaxadu waa: rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, iyo streptomycine. Kan ugu dambeeyaa waa daawo ah (antibiotic) qofka muruqa laga mudo.
Qiyaasta daawada loo qaadanaayo waxa loo qoraa tiiyo qiyaasta dawada lagu xadidaayo kolba miisaanka qofka. Daawada qaaxada waa in loo qaataa si joogto ah maalinkasta lana liqaa tiiyo calooshu madhantay. Waan sababtaas aya Finland gudaheed uu qof xirfadle caafimaad ahi uu qofka ula joogaa marka uu liqaayo daawada. Isla markaas shaqaluhu waxa ay hubinayaan in bukaanku uu liqo qiyaas kasta oo daawada ah lana socdaan hadii ay jirto dhibaato daawdu u keentay. Qofkasta oo qaada cudurka qaaxadu waxa uu xaq u leeyay in lala socdo marka uu daawada qaadanaayo. Hadii bukaanku uu hakiyo daawada ama jojiyo qadashada daawada markaas taas waxa ay u horseedaysaa in bakteriadu yeelato adkaysi aan daawadu Karin.
Daawayanta qaaxada caadiga ah ee u nugul daawooyinka qaaxada ee asaasiga ah waxa ay qaadataa lix bilood. Daawayntu waxa ay qaadankartaa mudo dheer hadii cudurku uu culusyahay. Xaaladaha caadiga ah 4 daawo ayaa la isticmaalaa labad bilood ee ugu horeeya dabadeedna laba daawo.
Daawaynta cudurka qaaxada